ICostco ukuqala kabusha iphepha lasendlini yangasese nokulinganiselwa kokuthengwa kwamanzi asemabhodleleni
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Shopping » ICostco ukuqala kabusha iphepha lasendlini yangasese nokulinganiselwa kokuthengwa kwamanzi asemabhodleleni
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Health News • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Shopping • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Ngonyaka owedlule bekushoda ukuthengiswa, manje sebenempahla eningi, kepha kunokubambezeleka kwamasonto amabili kuya kwamathathu ekukuletheni ngoba kunomkhawulo wezinguquko zesikhashana esifushane kuzidingo zamaloli nezokulethwa komhlinzeki.
AbakwaCostco bamemezele imikhawulo yokuthenga ezayo yezimpahla ezithile ngesikhathi kufonelwa izinzuzo ngoLwesine.
Imikhawulo yokuthenga evuselelwe iza ngemuva kokuthi izinkampani ezingenakubalwa zabeka imithetho efanayo ngonyaka odlule njengoba lolu bhubhane luqala, lushiya amashalofu ezitolo ephucwe izinto ezithile ezibalulekile.
I-Costco I-CFO iphinde yaphawula ukuthi ukushoda okukhulu kwama-chip chips kusalokhu "kuthinta izinto eziningi," kufaka phakathi amaphilisi, imidlalo yevidiyo nezinto ezinkulu zokusebenza.
I-Costco Wholesale Corporation, inkampani yamazwe aseMelika, esebenza ngaphezu kwezitolo zokuthengisa ezinamabhokisi amakhulu amakhulu e-US nase-500 nangaphezulu phesheya, imemezele ukuthi izobeka imingcele yokuthenga kwezinye izimpahla ezithengisayo, ngesikhathi kufona ucingo ngoLwesine.
Ngokuvumelana ne CostcoIsikhulu esiphezulu sezezimali (i-CFO) uRichard Galanti, umthengisi wase-US uzoqhubeka nemikhawulo ekuthengeni izinto ezithile "ezibalulekile", kubandakanya iphepha langasese namanzi asemabhodleleni.
Ehola ucingo lwezinkampani ezihola phambili, uGalanti uveze izingcindezi eziningi kumaketanga okuhlinzeka futhi waphawula ukuphakama kwesidingo ngenxa yalolu bhubhane, ethi Covid-19 Ukwahluka kweDelta kushayela kakhulu ekusetshenzisweni kwempahla.
"Izinto ezifaka ingcindezi yokuhlinzekwa kwemali kanye nokwehla kwamandla emali kufaka phakathi ukubambezeleka kwamachweba, ukushoda kwamakhonteyina, ukuphazamiseka kwe-COVID, ukushoda kwezinto ezahlukahlukene, izinto zokusetshenziswa kanye nezithako, ingcindezi yezindleko zabasebenzi kanye nokushoda kwamaloli nabashayeli," kusho uGalanti, wengeza ngokuthi "ukuhlela kubalulekile" uma kunikezwa lezo izinselelo.
I-CFO ayishongo ngqo ukuthi imingcele izophinde ibuyiswe nini - ngayo Costco ukuthenga okulinganiselwe phambilini kwempahla ethile ezinsukwini zokuqala ze-COVID-19.
Ekhombisa izizathu zokushoda okuthile, uGalanti ubalule isibonelo senkampani eyodwa yokuhlanza ebinenkinga yokugcina izinto emashalofini, ithi ibhekene nezinkinga ezahlukahlukene manje kunalokho eyabhekana nakho ngo-2020.
“Onyakeni owedlule bekushoda ukuthengwa, manje sebenempahla eningi, kepha kunokubambezeleka kwamasonto amabili kuya kwamathathu ekulethweni kwayo ngoba kunomkhawulo wezinguquko zesikhashana esifushane kuzidingo zamaloli nezokulethwa komhlinzeki, " uthe.
I-CFO iphinde yaphawula ukuthi ukushoda okukhulu kwama-chip chips kusengaba "nomthelela ezintweni eziningi," kufaka phakathi amathebulethi, imidlalo yevidiyo nezinto zikagesi ezinkulu, okuphakamisa ukuthi lezo zinkinga "zinganda ziye ku-2022."
Imikhawulo yokuthenga evuselelwe iza ngemuva kokuthi izinkampani ezingenakubalwa zabeka imithetho efanayo ngonyaka odlule njenge Covid-19 ubhadane seluqalile, lwashiya amashalofu ezitolo ephucwe izinto ezithile ezibalulekile - mhlawumbe okuyinhloko phakathi kwazo: iphepha langasese.
Yize abathengisi bebuyile emuva ngandlela thile selokhu kwaqala ukuthengwa kovalo, ngoMashi, i-CEO yomkhiqizi wezinkuni waseBrazil uxwayise ngokuthi enye inkinga yokushoda kwe-TP ingahle ibe khona ekhoneni, ithi ukungabikho kweziqukathi zokuthumela kungaveza ibhodlela elinzima lokusatshalaliswa.